तपाईको साताको भाग्यफल – हेर्नुस् माघ १२ गते देखी माघ १८ गतेसम्मको राशिफल संगै भगवानको दर्शन गर्नुहोस ! «
तपाईको साताको भाग्यफल – हेर्नुस् माघ १२ गते देखी माघ १८ गतेसम्मको राशिफल संगै भगवानको दर्शन गर्नुहोस !
Published : 26 January, 2020 1:32 pm
२०७६ माघ १२ गते देखी माघ १८ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल – ज्यो.प. सरोज घिमिरे
मेष राशि – चु, चे,चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ – साताको प्रारम्भमा कार्य क्षेत्रमा लगाईएको लगनसीलताको राम्रो कदर हुनेछ । मनोरन्जन मुलक यात्राको सम्भाबना रहेकोछ । महत्वपूर्ण जिम्बेवारी हात लाग्ने समय रहेकोछ । सभासम्मेलन जन्यकार्यमा सहभागीताको योग रहेकोछ । मान्यजनहरुको साथ सहयोगमा नयाँ कार्यको थालनिको निम्ती उत्तम समय रहनेछ । मित्रजनहरुको अधिक सामिप्यता उत्तम नरहला । स्थीर क्षेत्रमा लगाइएको लगानिको दिर्घ कालिन फाईदा प्राप्त रहनेछ । अध्यन अध्यापनका क्षेत्रमा खर्चिएको समय मध्यम रहनेछ । आम्दानिका बिभिन्न श्रोतहरु फेला परेतापनि कार्य क्षेत्रमा एक्लोपनको अनुभब रहनेछ । साताको अन्त्यमा अनावश्यक खर्चको सम्भाबना रहनेछ । परीबारका सदस्यहरुबाट टाढाँ भएको महसुस रहनेछ । बिश्वासिला ब्यत्तिहरुबाटँ धोका हुन सक्ने सम्भाबना रहेकोले साबधानि रहनु होला ।
बृष राशि – इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो – साताको प्रारम्भमा मित्रजनहरुको साथ सहयोगमा अधुराकार्यहरु सम्पादित रहनेछन । सम्पादित कार्यको उत्तम श्रेय प्राप्तहुनाले मन प्रशन्न रहनेछ । स्वास्थमा सामान्य समस्या देखा पर्नेछ । गरीरहेको कार्यमा समेत सामान्य झमेला उत्पन्न हुनेछ । आफन्तजनहरु सगँ बादबिवादको सम्भाबना रहेकोछ । मान्यजनहरु सगँको भेटघाटले उत्साहा दिलाउनेछ । यात्रामा बिशेष साबधानि अपनाउनु पर्नेछ । भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहनेछ । कार्य सम्पादनका निम्ती बिभिन्न कठिनाईको सामना गर्नु पर्ने समय रहेकोछ । सबारी साधनको प्रयोगमा साबधानि अपनाउनु उत्तम रहनेछ । मानसम्मानमा समेत आचँ आउन सक्नेछ । सामान्य अप्रिय खवरको श्रवण मनमा चिन्ता उत्पन्न हुन सक्नेछ । साताको अन्त्यमा आम्दानिका श्रोतहरु प्रशस्त फेला परेता पनि कार्य सम्पादनमा भने बिलम्ब हुन सक्नेछ ।
मिथुन राशि – का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह – साताको प्रारम्भमा कार्य क्षेत्र परीर्वतनको सम्भाबना रहेकोछ । शारिरीक अस्वस्थाको सामना गर्नु पर्ने सम्भाबना रहकोछ । ब्यापार ब्यवसायमा नयाँ लगानि उत्तम रहनेछ । जिवन साथीको साथसहयोग मनग्य प्राप्त रहनेछ । भोजभतेर जन्य कार्यमा सहभागीताको योग बन्नेछ । बाणीका कारण आफन्तजनहरुबिच सामान्य मनमुटाबको सम्भाबना रहेकोछ । यात्राकाक्रममा सामान्य असहज परीस्थीतीको सामना गर्नु पनेछ । अध्यन अध्यापनमा उचित समय दिन सकिनेछैन । आफ्नै लापरवाहिले सर सामानहरु गुम्न सक्ने सम्भाबना रहेकोछ । सामान्य कार्यका निम्ती अधिक समय खर्चनु पर्ने समय रहेकोछ । मान्यजनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । योसाता यात्राकाक्रममा तथा स्वास्थमा सामान्य समस्या देखा पनेछ ।